Faritra : Nomen'i Filoha baiko amita lalana 250km isan-taona
Nandritra ny fandraisana ireo fitaovana fanamboaran-dalana tao Toamasina dia nanome baiko ny Governora ny Filoha fa tsy maintsy mahavita lalana 200-250km isan-taona ny Faritra. Ny teti-bola voasoratra ho an'ny Faritra tantanan'ny Governora anefa dia 2 miliara ariary, ka ny 1 miliara hampandehanan-draharaha, ary ny 1 miliara ar hanaovana fotodrafitrasa. - Ny lalana 1km dia mitentina 5-6 millions d'euro, 25 miliara ariary eo raha autoroute.- Ny lalana 2x2 voies dia 4-5 millions d'euro na 21 miliara ariary ny 1km- Raha fanoloana ny couche de roulement amin'ireny lalam-pirenena ireny indray dia 100 000euro na 420 000 000 ar isaky ny km, raha hanamboatra vaovao kosa dia 2-4 millions d'euro na 17 miliara ariary isaky ny km. Tsy ao anatiny ny tetezana sy ireo fotodrafitrasa vaventy.- Raha hanao lalana pavé kosa dia 30 000euro na 120 000 000ar ny Km- Raha anao lalan-tany dia 10 000euro na 20 000 000ar eo ny Km
lundi, 25 janvier 2021 11:17
Fantatrao ve : Ny lalan'io vary io vao tonga eny ambiliha
Ny vary no foto-tsakafon'ny Malagasy, inona avy ny lalana ahatongavan'izany hatreny ambilha. Efa noresahatsika teto ny fahasahiranana rehetra amin'ny fambolem-bary, ny masokarenan'ireo tantsaha : 1 - Ohatrinona ny lany amin'ny tanim-bary 1ha - Mikarakara ny tany sy mamadi-bainga : 150 000ar- Zezika : 20 000ar- Karaman'ny mpiasa : 6 000ar miampy sakafo isan'andro, 5 lahy, 10 vavy mpanetsa 5 000ar x 5 andro = 150 000ar + 250 000ar + sakafo 100 000ar = 500 000ar- Fanafody mamono bibikely : 30 000ar- Mandidy vary : 100 000ar- Mively vary : 100 000ar- Mikororoka vary : 100 000ar- Kojakoja lany, fanamboarana angady, angadin'omby na kubota : 100 000ar- Fitotoam-bary : 100ar/kg raha entina ny apombo, 50ar kosa raha ajanona ny ampombo : 200 000ar/2tonnes Totaliny 1 300 000ar/ha amin'ny vary akotry 2tonne/ha na vary 1.2tonne vary fotsy.
Hatreto dia nosokajian'ny Jirama ho telo ireo foibe mpamokatra herinaratra, ka arakarak'izay fandaniana izay no amarotany amin'ireo mpanjifa, izay mbola sokajiany ho olon-tsotra, mpivarotra, mpamokatra na indostrialy. Sokajy 1 na Zone 1 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny rano (Energie Hydraulique), na irony barazy ironyIvotoerana 21 no voakasik'izay. Sokajy 2 na Zone 2 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny solika mavesatra (Fuel)Ivotoerana 02 no voakasik'izay. Sokajy 3 na Zone 3 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny Gazoala (Gazole)Ivotoerana 92 no voakasik'izay. Mazava ho azy, fa tsy mitovy izany ny saran'ny Jiro aloan'ireo mpanjifa ireo arakaraky ny Sokajy misy azy. Ny Sokajy 1, mora kokoa ny saram-pamokarana dia mandoa mora ireo mpanjifa, manaraka azy eo ny Sokajy faha 2, ary mibaby ny lafo indrindra ny mpanjifa ao amin'ny Sokajy faha 3.
Filoham-pirenena : Avy Antananarivo Filohan'ny HCC : Avy AntananarivoFilohan'ny Loholona : Avy AntananarivoFilohan'ny Antenimieram-pirenena : Avy Ambatofinandrahana Ambositra FianarantsoaPraiminisitra : Avy Antsiranana
mardi, 19 janvier 2021 09:00
Antenimierandoholona : Nanao tatitra ny asa nataony ny Vaomiera mpanao famotorana
Nanao tatitra ny asa natao, manoloana ny mpanao gazety sy ireo vahiny nasaina, ny Vaomiera mpanao famotorana « commission d’enquête » ny alatsinainy 18 janoary 2021, teo anivon’ny Antenimierandoholona. Tatitra mahakasika ireo Lohahevitra efatra : - Fitantanana ny lafin’ny ara-bola eo amin’ny fiatrehana ny valan’aretina Covid-19, - Ny fanafarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika teto amin’ny firenena,- Ny fisian’ny « doublon » tamin’ny fifidianana natao tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena farany teo,- Ny famonoana faobe ireo voafonja nandositra tany Farafangana. 1- Teo amin’ny fomba nitantana ny lafin’ny ara-bola ny fiatrehana ny valan’aretina Covid-19 dia nolazain’ny Loholona Rafidiarison Jean Rémi Gabriel, izay Filohan’ny vaomiera misahana ny fanadihadiana, fa ny lafin’ny fanampiana ara-bola ny fiatrehana ny valan’aretina Covid-19 azon’ny firenena Malagasy tamin’ireo mpiaramiombon’antoka no lazaina. Nambarany fa izany fanampiana izany dia natao ho an’ny vahoaka Malagasy iray manontolo ka rariny sy hitsiny raha ampahafantarina ny vahoaka Malagasy ny fanadihadiana marina.
Tsy nahita maso ilay fitaovana aho, eo ireo scientifique anamarina azy, fa ny fijeriko ny sary dia tsy anneau satellite izany io. Ny Vaisseaux habités na ireny zanabolana misy olona ireny dia any amin'ny 200-800km miala ny tany, ny Satellite géostationnaire mampifandray antsika amin'ny téléphone ireny dia any amin'ny 35 000km miala ny tany. Ny rivotra iainantsika anefa eo amin'ny 20Km eo fotsiny, ambanin'ny Strastosphère, ary mahatratra -56°C ny hatsiaka eo. Betsaka ireo fako sy sattellite tsy miasa intsony no mifanaretsaka eny ambony eny, fa raha misy zavatra latsaka, dia mahatratra 2800°c ny hafanana rehefa hiditra ny rivotra iainantsika noho ny hafainganampandeha milatsaka sy ny fikasoka amin'ny rivotra. Ka eto aho mahita amin'ny sary, tuyau plastique, sy kojakoja solaire, sy bidon, fil, panneau solaire izay tsy ahazaka velively na hatsiaka -50° raha nihoatra ny 20km ny haavony, ary indrindra moa raha anneau satellite no nilatsaka, dia nikarainkona toa ny kanety io vao tonga tety, tsy nisy dian'afo na ny kely aza io fitaovana io.
Hiala tsy hanao politika intsony ny filoha Andry Rajoelina raha tsy vitany ny lalana RN13 Tolagnaro-Ihosy, araka ny teniny izay nanakoako tokoa tamin’ny taon-dasa. Mbola namafisiny tamin’ny kabariny ny 31 desambra 2020 teo fa anisan’ireo tetikasa goavana hatomboka amin’ity taona 2021 ity ny fanamboarana izany lalam-pirenena izany. Angamba ho ny talata faha-19 janoary izao no hambara amin’ny fomba ofisialy ny fanombohan’ny asa.Hatao any Tolagnaro amin’io andro io mantsy ny fanombohana ny fambelonkazo manerana ny nosy amin’ity taona 2021 ity.Mety ho lanonana maro sosona no hisy any an-toerana amin’io andro io. Anisan’ny mampijaly ny mpampiasa lalana raha iny RN13 iny manokana.Ankoatra ny faharatsiany dia manao ny ataony ihany koa ny afitsoky ny asan-dahalo sy ny jiolahy, izay mampalaza ny any Atsimo. Amin’izao indray dia misy ny tiomena izay manototra ny ampahan-dalana eo anelanelan’Ambovombe sy Tolagnaro.Tototra hatrany amin’ny antsasa-metatra ao anaty godram-bovoka (fa tsy godram-potaka) ny arabe ka fahoriana ny fandehanana eo aminy.Misy aza ireo izay tena tototra lalina mihitsy.
jeudi, 14 janvier 2021 12:04
Covid-19 : Mila atao ara-dalàna hatrany ny fampiasana olona an-tery
Ny Lalampanorenana dia mametraka mazava ny fahalahan'ny tsirairay hiaina, hivezivezy na ny tenany na ny fananany. Malalaka ny hivoaka sy hiditra an-tanindrazana. Ekena fa misy ny ahiahy tsy ihavanana mahakasika ity aretina Covid-19 ity, ekena fa mila mitandrina ny rehetra ary manaja ireo fanentanana ara-pahasalamana. Misy kosa anefa ny lalàna izay omen'ny Lalampanorenana ahafahan'ny fanjakana mametra izay fahafahan'ny tsirairay izay hitsonjavana ny tombotsoa iombonana.Misy ireo olona izay ampanaovina Travaux d'interet Public na TIG ho an'izay tsy manao arovava, misy ny fanakatonana ny sisin-tany. Izany rehetra izany dia tokony asiana lalàna voasoratra fa tsy atao resaka am-bava fotsiny. Hatreto ny fanjakana dia tsy mbola namoaka état d'urgence na amehana ara-pahasalamana vaovao, ka ny famerana ny fivorivorian'ny olona, ny fanasaziana olona hanao TIG, hatramin'ny fanerena azy androaka fako anaty tatatra misy tay, ny fanadiana ny sisin-tany dia tokony hisy lalàna avokoa. Ny ankoatr'izay dia fanararaotam-pahefana, ary mety hanaratsy endrika ny mpitandro ny filaminana sy ny fitondrana. Mirary soa.Patrick (Jereo Sary Tohiny)
Lasa toeram-pamaharana ny masoivoho malagasy any ivelany. Misy ny fianarana manokana momba ny diplomasia, izay asa ilana fahaiza-manao matihanina satria hifandray amin'ny firenena maro, ary fitaratry Madagasikara any ivelany. Na ireo fomba fifandraisana, na ny teny ampiasaina, eny hatramin'ny akanjo fitafy, misy dikany avokoa, na ny loko ampiasaina aza. Taona maromaro anefa izay, dia lasa toerana politika ny toerana masoivoho rehetra, satria toerana fandefasana ireo namanamana, na ireo fahavalo politika mihitsy azy, toy ny hoe garazy hipetrahany tsy hitabatabany intsony.